Barea-CAN 2012 : Matahotra ny mpijerin’i Mahamasina
Miankina amin’ny fahendren’ny mpijery ny ho avin’ny kianjaben’i Mahamasina, amin’ny lalao mandroso hihaonan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Syli National, avy atsy Guinée.
« Matoky ny fahendren’ny mpijery baolina malagasy eto Antananarivo aho », hoy i Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta , filohan’ny ligin’ny Analamanga, baolina kitra. Na izany aza anefa dia nohamafisina ihany ny fitandroana ny filaminana eny Mahamasina, mandritra ny lalao mandroso hihaonantsika amin’ny Alzeria, izay hatao amin’ny alahady ho avy izao.
« Tsarovy fa mbola mihantona ho antsika ny sazy avy any amin’ny Fifa taorian’ny toraka tavoahangy nandritra ny lalaon’ny Barea sy Etiopa », hoy i Tôta.
« Ny fanohanana tahaka ireny fanohanana ataon’ny any ivelany ireny no tokony hataontsika mandritra io lalao io. Malagasy izahay milalao baolina ka tokony hanohana anay ny mpijery », hoy i Pascal Razakanatenaina na i Bapasy, kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasy, nanantitratintra izay fitandroana ny filaminana izay.
Raha ny fanazarantena faramparany nataon’ny Barean’i Madagasikara tetsy Mahamasina dia ireo mpilalao tompon-toerana amin’ity lalaoa ity.
Mampanahy kely fotsiny ny momba an’i Voavy Paulin, izay mbola mitandritandrina noho ny ratra nahazo azy. I Bolida indray na dia mandringa aza dia mbola nampiseho fa afaka mampiseho ny fahaizany etsy Mahamasina. Lalao roa no heverina fa homanina amin’ity fihaonana ity dia ny lalao afrikanina hatao any Maputo sy ny Lalaon’ny Nosy hatao any Seychelles.
Madagascar : Météo – La dépression tropicale Chalane quitte Madagascar et semble se diriger vers la Mozambique
Madagascar : Les feux de brousses détruisent les forets malgaches
France : Covid-19 – les essais des vaccins ont commencé